Etymology yemazita emunyika yeAfrica - AFRIKHEPRI
Iye anodzivirira bulb iyo inogona kushandiswa kwe80 makore
27 min kuverenga
Swanga uine kwainobva zita renyika yako?
Afrique du Sud Description; yenzvimbo yaro yenharaunda pamusoro pekondinendi yeAfrique.
Azania (mamwe mazita): vamwe vanopesana nehurumende yekurambana akashandisa zita racho Azania panzvimbo ye "South Africa". Kubva kwezita iri hazvizivikanwi, asi kunoshandiswa kunzvimbo dzinoverengeka dzeSouth Africa neSouth Africa. Pane mimwe miviri yekuita kwezita racho: kubva muchiArabic 'ajam ("Mutorwa", "kwete-Arab"), kana kuti chiito chechiGiriki azainein ("Dry", "dry out").
Down (zita risina zita): zita rezita rezita rakakurumbira risina kumbobvumirwa nemaitiro. uMzantsi zvinoreva "kumaodzanyemba" mukati Xhosa.
Angola De Ngola, zita rinoshandiswa namambo weumambo hwa Ndongo. VaPutukezi vakatumidza nzvimbo iyi mukukudza kwe a Ngola mubetseri.
Benin Anciennement Dahomey, nyika yakatumidzwa zvakare Republic of Benin muna 1975 maererano ne Gulf reBenin (kumhenderekedzo yezasi). Iri zita rakasarudzwa nekuda kwekusarerekera kwaro, sezvo miganhu yezvematongerwo enyika yeBenin ichiunganidza pamwe kupfuura mapoka makumi mashanu emitauro yakasiyana uye dzinenge madzinza akawanda. ari Benin mu Gulf reBenin ndiro iro iro zita reushe hwekare (the Umambo hweBenin) yenharaunda yacho, yakabatanidzwa Benin City, nhasi pa Naijeriya. Umambo hwacho hahufukidze nharaunda yazvino yeBenin, uye hauna mamiriro ezvakaitika kare nenyika. Zita racho rinogona kutorwa kubva Ubini, Du yoruba Ile-ibinu, kureva "nyika yemakakatanwa", achitaura nguva yekukakavadzana muumambo, uye yakashandiswa (zvichida kushora) neYoruba. Zita iri rakazochinjwa zvakare nevatengesi vokuPutukezi vokutanga Benin, uye izwi rakabatana Bini, zita revanhu (vanoshandisa zita racho Edo kuti ataure kwaari). Vamwe vanoti izvozvo Bini inobva kuArabic بني naBhani, "Vanakomana".
Zita racho Dahomey ndiro zita reushe hwekare Fon, uye yakanzi haina kufanira nokuti yaiva zita rezera guru pane imwe nyika. Zita rake rinoumbwa dhani(nyoka), achitaura kune mambo aigara Abomey ; ho zvinoreva "mimba" uye ini "Muna".
zimbabwe Anonzi mushure mekunge rudzi rwakakura kwazvo munyika, Tswana.
Zita rekare renyika, Bechuanaland, yakabva ku Bechuana, imwe shanduro ye "Botswana".
Burkina Faso Pamitauro miviri mikuru yenyika, zvinoreva "nyika yevanhu vakamira vakarurama", "nyika yevanhu vakatendeka", kana "nyika yekusaparara". Burkina inobva parurimi More, Faso duDioula.
Mutungamiri Thomas Sankara akashandura zita renyika kuenda ku1984 mushure mekutsvaga kwake 1983. Zita rokutanga, Republic of Upper Volta, yakatumidzwa mazita edzimhosva mbiri Volta River, vose vane zvinyorwa zvavo muBurkina Faso. Rwizi rwakatumidzwa nevatengesi vegoridhe vePortugal; yakanga iri pamagumo ekuongorora kwavo vasati vatendeuka. Volta chiPutukezi che "tour" kana "zigzag".
Burundi Kubva mumutauro wemo, zvinoreva "nyika yeavo vanotaura kirundi ".
Cameroun Kubva muchiPutukezi Rio de Camarões ("Shrimp River"), zita iro vaongorori vechiPutukezi vakanga vapa rwizi Wouri at the xve remakore.
République du Congo Anonzi mushure meumambo Kongo, iyo pachayo yakabva kune zita revanhu Bakongo.
République Democratique du Congo Anonzi mushure meumambo Kongo, iyo pachayo yakabva kune zita revanhu Bakongo. Zaire, zita rake rekare, rinobva kuPutukezi Zaire, kushandiswa kwezwi rokuti kongo nzere ou nzadi, "Rwizi runomedza nzizi dzose"
Ivory Coast Dzokorora kune kushandiswa kweayivhori munharaunda. Zvimwe zvikamu zvegungwa reAfrica zvakatumidzwa zvakafanana: "Gungwa rezviyo", "Gold Coast", uye "Slave Coast".
Jibhuti mumutauro weAfar 'buuti' zvinoreva pfu, nheyo inotaura kuti mutoja mutsva (vagari vese) vanogara vakangosvika vanobvunza mukadzi zita renyika rinoratidza pasi kuti iye anzwisise uye achitarisa pasi akamuona pombi uye kupindura "ii buuti" iyo ndiyo poto rangu uye zita richava Djibouti.
mu Somali zita ine mashoko maviri 'jab' izvo zvinoreva hafu kana yokukuvadzana, kana nharaunda uye 'buuti' izvo zvinoreva zita rakapiwa vakadzi cannibalistic varoyi 'mukadzi munharaunda muroyi' 'jab buuti' apo Djibouti .
Egypt Du Ratini Aegyptus, zvakare chiGiriki chekare (yakatosimbiswa Mycenaean) Αἴγυπτος (Aigyptos). maererano Strabo zita rechiGiriki rinobva kuna Αἰγαίου ὑπτίως (Aigaíou hyptíōs): "Nyika iri pasi apa Gungwa reAegean ". Inogonawo kuwana kubva kune zita reEgipita Memphis, * ħāwit kuʔ pitáħ, zvinoreva "imba (kana temberi) ye Ptah ".
Miṣr مصر (zita racho arabakadaro Maṣr en Egyptian Arabic): shoko oukuru akapararira ( Hebrew : Mitzraim), yakashandiswa kureva kuEgypt muna weAkkadian, uye zvinoreva "guta" kana "kugara pasi, zvakawanikwa" muchiArabic. Mazita Turkish et Malay, Egypt et Mesir zvichienderana, dzinobva muzita rechiArabic. Izwi rechiHebheru rinoreva zvakafanana nekaviri, zvinoreva "mbiri dzeIjipiti", uye zvinogona kukonzera umambo hwekare hwe Upper Egypt et Lower Egypt. Izwi rechiHebheru rinogonawo kureva "matambudziko" kana "nzvimbo dzakatetepa", achitaura nezvemaitiro enyika, iyo inotevera nzira ye kn. Kukosha kwayo kwezvakaitika kare kunonyanya kukosha mune Bhaibheri, panguva yenyaya ye Exodus.
Keme Ⲭ음 (zita racho Coptic): "Nyika yakaoma" (kubva kuEgypt yekare kmt), achitaura dope reNile shure kwemafashamo ezhizha, akatarisana negwenga, anonzi "nyika yevhu" (yekare yeEgipita DSRT).
Ethiopia Kubva pashoko rechiGiriki Αἰθιοπία (Aithiopía ; latin: Aethiopia), kubva kuAccἰhίοψ (Aithíops), "Ethiopiya", dzimwe nguva yakaputsika nevatsvakurudzi sezwi rechiGiriki rinoreva "chiso chinopisa (ὤψ)" (αἰθ). Zvisinei, mamwe magwaro muEtiopiya (somuenzaniso, the Bhuku raAksum XVIe kana xviie mazana emakore) vanoti zita racho rinobva "Ityopp'is", mwanakomana we Kishi, mwanakomana waHamuuyo, maererano nenhau, akateya guta raAxum. Panewo maonero mashomanana evamwe vanotsvakurudza kuti izwi rechiGiriki rokuti Αἰθιοπία rinobva pashoko rekare rekare rinoreva "rusenzi" kana kuti "zvakanaka", rinoshandurwa zvakare nevaGiriki.
shona (zita rekare rekare rinoreva nzvimbo dzakakwirira dzeEtiopia uye rinowanzoitwa seimwe zita rehurumende, iro risina kumbobvira rakatongerwa): rakabva mufananidzo wechiArabic (الحبشة) yezwi Ge'ez (ሐበሻ) (uye vamwe Mitauro yeZvirevo) habesha, zita iro pamwe chete rinoreva kune vagari vemahombekombe avo vave vachigadzirisa nyaya dzehurumende kubva panguva yekare.
Gabon De Gabao, zita rechiPutukezi renzvimbo yegungwa reKomo River (muchiFrench: Estuary yeGabon). Inzvimbo iyi inotora zita rayo kubva pachimiro chayo, iyo inoratidzika seye yejasi rehood (Gabao).Gabao inobva kuArabic قباء (Qaba ').
Gambia Du Gambia River ichiyerera munyika. Izwi Gambia zvichida inotora shoko rechiPutukezi change ("Exchange", "misika"), achitaura nezvebhizimisi rakagadzirwa nevaPutukezi ikoko.
Ghana Kubva muzita reumambo hwekuMadokero weAfrica. Zvisinei, nharaunda yemazuva ano yeGhana haina kumbova chikamu cheumambo. JB Danquah akaratidza zita racho nguva pfupi vasati vasununguka venyika. Kutsvakurudza kwake kwakamuita kuti atende kuti vanhu veGhanai nhasi vanoburuka kubva muumambo hwekare; vamwe havabvumirani nemafungiro ake. IzwiGhana zvinoreva kuti "murwi mambo" uye yaiva zita rakapiwa madzimambo eUmambo hweGhana22.
Côte-de-Gold (zita rekare rekoloni): maererano nehuwandu hwegoridhe rakawanikwa munyika nevakabva kuEurope. Zvimwe zvikamu zvegungwa reAfrica zvakatumidzwawo nezvezvinhu zvavo zvinokosha zvikuru: " Ivory Coast "Muranda Coast", "Coast yeCereals".
Guinea Mutauro sousou, zvinoreva kuti "vakadzi". VokuEurope vokutanga vakapinda munharaunda iyi vangadai vakanzwa pasi-soro, mutauro mukuru wevagari vepagungwa reGuinea. Inobva muchiPutukezi Zimbabue, inofungidzirwa kuti inobva kune zita reAfrica, kana zvichida kubva Berber Akal n-Iguinawen ou aguinaoui, "Land of the Blacks".
Zita rake rekoloni raiva French Guinea.
Guinea-Bissau Iyi nzvimbo inonzi Guinea ine guta guru reguta Bissau.
Zita rake rekoloni raiva Portuguese Portuguese.
Equatorial Guinea "Equatorial", kubva équateur. Iko equator haifaniri kuyambuka munharaunda yenyika, asi nyika inotarisana neEquator kubva pachiwi chachoAnnobon iri kumaodzanyemba, nepo nyika yakakwirira iri kuchamhembe kweiyo mutsara. "Guinea" inogona kunge iri izwi Berber aguinaoui, zvinoreva kuti "dema".
Zita rake rekoloni raiva Sipanishi Guinea.
Kenya Kubva zita ra Gomo reKenya, iye pachake kikuyu Kere-Nyaga ("Gomo rekuchena").
British East Africa (zita rekoloni): maererano nenzvimbo yaro nzvimbo uye zita remasimba ekoloni, Great Britain.
Lesotho Maererano nemazita e Sothoizvo zvinoreva kuti "dema" kana kuti "ganda rakacheneswa".
Libya Kubva zita remhuri yekare Berber appelée Libyans neVaGiriki uye Rbw neVaEgipita. Kusvikira kuzvimiririra kwenyika, izwi rokuti "Libya" rinowanzoshandiswa chete kurenje guru pakati pezvitsuwa tripolitaniennes uye nechokumaodzanyemba Fezzan kumadokero, uye mupata kn muEgipita kumabvazuva. Tripoli iri zita rakasarudzwa kuguta guru renyika, uye zita rekumusoro-kumabvazuva kweruwa, Cyrenaica sezvo zvisingashandisi, "Libya" yakazova zita rinobatsira renyika, pasinei nokuti yakawanda yerenje Dongo reRibhiya iri chaizvo munharaunda yeEgipita.
Madhagasika Kubva zita rechitsuwa iri malagasy, Madagasikara, iyo pachayo yakabva kune Proto-Malay "Kuguma kwePasi", kureva kunzvimbo yakakura kuenda kune chitsuwa kubva kunyika dzepakutanga dzevamwe vanhu:Southeast Asia.
Malawi Zvichida zvakabva kune izwi rechiAboriginal rinoreva "mvura inopisa" kana kuti "marimi emoto", zvichida yakabva pane kuratidzwa kwezuva pane Lake Malawi. Mutungamiri Hastings Banda (muvambi wenyika), akataura mubvunzurudzo kuti mumakore e1940 akanga aona "Maravi Lake" mu "Bororo nyika" pamapu ekare eFrance anonzi "Lower Guinea kusanganisira Kingdoms of Loango, Congo, Angola neBenguela. Akasarudza zita rokuti "Malawi" kwete "Nyassa" (kana kuti "Maravi"). "Lake Maravi" hazvirevi kutarisana neLake Malawi. Banda aine simba rakawanda munguva yekusununguka mu1964 kuti kutumidzazve Nyasaland mu "Malawi" kuchagamuchirwa.
chokuNyasaland (zita rekoloni): nyasa zvinoreva "chikepe" mumitauro yenharaunda yacho. Zita rakanga raiswa kune Lake Malawi (iyo yainzi "Nyassa Lake" kana "Niassa").
Mali Kubva kumambo weWest Africa wezita rimwechete (nyika huru yemazuva ano iripo munharaunda yehu umambo hwakaparara). Izwi Mali zvinoreva kuti " Mvuu »the Malinke et Bamana.
Mauritanie Kubva muchiLatin zvinoreva "nyika ye Moors ". Inonzi (mukukanganisa) maererano ne Mauretania northern history of Maroc, anonzi zita rechizvarwa mauri kana vaMoor.
Naija Maererano nezita ra fleuve Niger, kubva kuAboriginal term Ni Gir ("Gir River"), kana Tuareg kuita eghirren ("Mvura inoyerera")44. Inowanzotaurwa zvisina kufanirwa (zvikurukuru neLatinist) yakabva muchiLatin Niger ("Dema"), kureva kurudzi rweganda rwevagari vemo.
Naijeriya Maererano nezita ra fleuve Niger. Ona Niger pamusoro.
Rwanda Kubva nezita revanhu vechiRwanda. Rwanda inoreva "guru", "kukura zvishoma", "pasina miganhu", "zvose zvakasikwa"
Senegaro Kubva zita ra Rwizi Senegal, chirevo chePutukezi chezita rechizvarwa Berber zenaga (muchiArabic Senhaja), iyo inotonga nzvimbo zhinji kumucheto kwezuva rezuva reSenegal (mune nhasi nhasi Mauritanie). SENEGAL = SUNU GAL zvinoreva chikepe chedu mumutauro wechi Wolof
Sierra Leone Yakashandurwa kubva Sierra Leona, chiSpanish version rechiPutukezi Serra Leoa ("Masango emakomo"). Muongorori wechiPutukezi Pedro de Sintra anodana nyika maererano nemamiriro emakomo iye anoona mu1462 paanenge achifamba nemhenderekedzo yeWest Africa. Hatizivi kuti nei makomo akaita kuti afunge nezvazvo shumba vanogona kutarisa semeno emhumbwa, kana shumba dzinovata, kana kutinhira kwakasimbiswa ikoko kwakafanana pamwe nekurira kweshumba.
Somalie Kubva mazita e Somalisheni, vanhu vanogara imomo. Iveymology yezita ravo inoramba iine chokwadi, asi kune zvingangodaro: zvinobva kune maal bag ("Avo vanochengeta mombe"), kana muteteguru wenhema anonzi Samaale.
Soudan Kubva kuArabic Biradha se-Sudan (البلاد السودان), "Land of the Blacks". Yakataurwa kunobva kune vakawanda Sahel.
Tanzania Musanganiswa wemazita emaviri maviri ekare anoita nyika ino: the Tanganyika bv Le ZanzibarTanganyika inotora zita rayo kubva pane eponymous lake. changamire Richard Burton ndiye wokutanga kuEurope kuona iyi dziva, uye anotsanangura kuti zita racho rinobva mumutauro wechiAboriginal: tou tanganyka ("Join", muchirevo che "uko mvura inosangana"). Mu 1871 Henry Morton Stanley anoti shoko rinobva Tonga ("Chiwi") uye hika ("Dish"). Dzidziso mbiri idzi hadzina chokwadi.Zanzibar, panguva iyo, inotora zita rayo kubva Zengi kana Zengj (زنكي), vanhu vemo vane zita rinoreva "rima". Uyu mudzi unobatanidzwa neArabic barr (برر), kureva "gungwa", "gungwa".
Tchad Zita zita re Lake Chad, kumaodzanyemba-kumadokero kwenyika. Gungwa rinotora zita racho kubva pashoko Bomu Tsade ("Lake")
Togo Kubva mumusha weTogo, nhasi Togoville. Kubva ewe mutauro : to ("Mvura") uye go ("Coast").
Togo français, Togoland (mazita echikoloni). ari Western Togo ndiro zita reimboimbo reBrithani mune izvo nhasi nhasi chikamu che Ghana.
Kubva zita reRwizi Zambezi, iyo inoyerera kumabvazuva kwenyika uye inoita muganhu neyo zimbabwe.
Northern Rhodesia (zita rekoloni): maererano nezita remhuri Cecil Rhodes, gurukota uye bhizinesi South African izvo zvakabatsira kuwana chikoro. Kutaura kwe "North" kwakaparadzanisa kubva Southern Rhodesia (nhasi the zimbabwe).
Kuchinjwa kwe shonaDzimba-Dze-Mabwe, zvinoreva "dzimba dzemabwe" (dzimba kuva muzhinji imba, "Imba", uye Mabwe kuva muzhinji bwe, "Dombo"), achitaura nezvemasvingo ematombo ehurumende yekare yevatengesi Great Zimbabwe.
Southern Rhodesia, Rhodesia (mazita emakoloni): maererano nezita remhuri Cecil Rhodes, gurukota uye bhizinesi South African izvo zvakabatsira kuwana chikoro. Kutaura kwe "South" kwakaratidza kusiyana kwacho kubva Northern Rhodesia (nhasi the Zambia).
Dudziro yezvakabva mazita nemazita emaAfrica
1 nyowani kubva ku € 15,00
1 yakashandiswa kubva € 43,10
kubvira waMay 24, 2020 11:46
Mhuka yeAfrica ye Vitruvian munhu
Chirongwa chekurapa kweRumba